Batanidzwa - BullyingCanada
kubva kuvanhu vakaita sewe
ponesa upenyu. Ipai vana vanodheererwa ramangwana rakajeka Donate Now Iva mutsauko wakakosha
kuvana vanodheererwa. Nyorera Nhasi Iva Hupenyu Ne BullyingCanada Iva murevereri
zvevana vekuCanada vanodheererwa. Kushanda zvakananga nevana vari kunetseka kwete iwe?
BullyingCanada ine chido chikuru chevazvipiri kuti vabatsire nemabasa mazhinji ekumashure ehofisi. Join BullyingCanada Batanidzwa Nhasi
Dzosa Mufaro kune Vanodheerera Vechidiki veCanada
Vana vari munjodzi, munyika yose, vimbai BullyingCanada awa imwe neimwe yezuva nezuva.
Tariro yeVana Vakatambudzwa
Iwe unogona kuita shanduko huru muhupenyu hwevana vanodheererwa nemhuri dzavo chete $ 21 pamwedzi
Kana mwana achinetswa kwenguva refu, mukana mukuru wokuva namavanga omuviri, ndangariro, uye ndangariro anogona kugara kwoupenyu hwose. Kudheerera kunogona kuparadza chivimbo, kuchisiya vana vakasununguka uye vasina kuchengeteka—nekutya, kurwadza kwomudumbu, uye kurota zvinotyisa. Havagoni kuisa pfungwa dzavo muchikoro, zvichiita kuti vawane mamakisi asina kunaka izvo zvingaita kuti mikana yavo yeramangwana iri ive shoma. Kana kudheerera kusingaregi, kuora mwoyo uye kushungurudzika zvinogona kuita kuti vana vazviuraye.
Zvinoda kushinga kukuru kuti vana vauye kwatiri kuti tibatsirwe. Rupo rwako kunoita kuti tive nechokwadi chokuti kuchema kwose kwokurwadziwa kwokubetserwa kunopindurwa. Awa imwe neimwe. Mazuva ese.
BullyingCanada Inoponesa Upenyu
Kupa nekukurumidza, chiito chetsitsi kutsigira vechidiki vanodheererwa, BullyingCanada ine zvirongwa zvakasiyana-siyana uye masevhisi ekurwisa kudheerera nyika yese.
vechidiki vakashanda muna 2020
makore ebasa rerudo BullyingCanada inoda kushandira vana vanotambura
Wekudzidza BullyingCanada Kusiyana
BullyingCanada yave ichizivikanwa pasi rose nekuda kwemaitiro ayo akasiyana ekubatsira vana vanodheererwa kupedza kushungurudzika kwavo. Dzidza zvakawanda nezve BullyingCanada nekuedza kwayo nhasi:
Nguva Yese Inokosha
Ndokumbirawo mupe izvozvi
Tsigira Kudheerera Canada Nhasi
Makumi ezviuru zvevechiduku muCanada mose vanowana rubatsiro runokosha kubva kwatiri gore negore-mamwe mamiriyoni kubva kumativi ose enyika Vimba ne BullyingCanada zvekubatsira mumamiriro avo ezvinhu.
Ndapota simbisai kufona kwese kunodairwa nokupa chipo chorupo, chinobvisirwa mutero.
Batsira kupa vana vanodheererwa ramangwana rakajeka.
Ongorora Mikana Nhasi